Manchester City oo awood kula wareegtey hogaaminka Premier League-ga & warar kale – SBC
Manchester City oo awood kula wareegtey hogaaminka Premier League-ga & warar kale
Kooxda boorsooyinka lacagta la wareegaysa ee kooxaha kubada cagta ugu taajirsan Manchester City ayaa awood kula wareegtey horyaalka English Premier League-ga ka dib markii ay 4-1 ku suuldaartey kooxda Aston Villa ee ka dhisan magaalada Birmingham.
Man City oo gurigeeda Etihad Stadium ku qaabishay kooxda Aston Villa ayaa goolkii ugu horeeyey waxaa si xarago leh oo labaaleey ah shabaqa ugu hubsadey ciyaaryahanka dabeecada ka aradan ee Mario Balotoli, waxaana labeeyey Adam Johnson, halka uu sadaxeeyey Vincent Kompany oo ku kaabeynaya captain-ka kooxda Man City ka dib markii uu falaagoobey Carlos Tavez.
Inkastoo Aston Villa ay la timid hal gool oo madi ah oo u dhaliyey ciyaaryahan Stephen Warnock, hadana waxaa goolka quusinta u dhaliyey Man City James Milner oo isagu aan farxad ugu dabaal degin goolkiisa maadama kooxda AstonVilla ay aheyd kooxdiisii hore ee laga soo gatey.
Tababaraha Man City wuxuu keydka ama kursiga uga tagey ciyaaryahanada David Silva, Edin Dzeko & Samir Nasri isagoo u daayey Balotelli afka hore ee weerarka wuxuuna ku ciyaarayey shaxda 4-5-1, walow Silva lagu soo galiyey badal.
Guusha ay gaartey Manchester City ee ay xaqiiqsatey sadexda dhibcood waxay awood kula wareegtey hogaanka Premier League-ga iyadoo ka marooqsatey kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihin ee ay sida weyn u xifaaltamaan ee Manchester United oo shaley ciyaartii ay la wadaagtey Liverpool lagu qabtey barbar dhac.
Balotelli (Daqiiqadii 28-aad)
Johonson (Daqiiqadii 47-aad)
Kompany (Daqiiqadii 52-aad)
Milner (Daqiiqadii 71-aad)
Goolka Aston Villa
Warnock (Daqiiqadii 65-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Etihad Stadium waxaa soo xaadaray daawadayaal gaaray 47,019 (Afartan & todobo kun sagaal & toban qof).
Manchester United oo barbardhac naf la caari ah ka heshay Liverool.
Kooxda Man United ee iminka haysata koobka English Premier League ayaa shaley oo sabti ah waxay barbardhac kula gashay guriga kooxda ay xifaaltamaan ee Liverool ee Infield.
Kulankan oo ahaa mid aad u adag wuxuu ahaa kulankii 182-aad ee ay isaga horyimaadaan labadan kooxood waxaana gool laad xor ah (Free Kick) ku hubsadey shabaqada Man United captain-ka Liverpool ay ku dhaarato Steven Gerrard oo mudo dhaawac & nasiino uga maqnaa garoomada waxaana goolkan uu ahaa kiisii koowaad ee xili ciyaareedkan.
Kulankan oo u muuqdey in macalinka Man United Sir Alex Ferguson uu ku soo tala galay difaac isla markaana uu keydka fariisiyey ciyaaryahano muhiim ah oo aanu ku bilaabin ciyaarta kuwaasi oo ay ka mid yihiin Wayne Rooney, Nani, Valencia, Javier Hernandez & Vidic kuwaasi oo ay u muuqatay in uu u keysanayo kulanka todobaadkan ee Champion League-ga & kulanka kale ee dabriga ah ee Man City ay la ciyaarayaan todobaadka soo socda.
Laakiin dhamaadkii ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 9 daqiiqo ayaa weeraryahanka reer Mexico Javier Hernandez oo badal lagu soo galiyey ciyaarta wuxuu durbaba ku bilaabey qalqalgalin daafaca Liverpool isagoo gool caaqibo leh dhex dhigay shabaqa Liverpool oo naawilaysay helitaanka sadexda dhibcood ee kulanka si ay ugu guurto afarta kooxood ee ugu horeysa kala horeynta horyaalka.
Dhibicda ay ka heshay Man United kulankii shaley ee martida u aheyd Liverpool wuxuu meesha ka saarey sadex kulan oo isku xigta oo ay booqatey Infield Stadium oo ay guuldaro ka soo gaartey.
Gerrard (Daqiiqadii 68-aad)
Harnandez (Daqiiqadii 81-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Infield Stadium ee Liverpool waxaa soo xaadirey 45,065 qof
Chelsea oo xajisatey kaalinta sadexaad ka dib markii ay dhulka ku jiiday kooxda Everton
Kooxda Chelsea ee ka dhisan Galbeedka magaalada London ayaa kulan ay gurigeeda Stamford bridge ay kula yeelatey kooxda Eeverton ee ka dhisan magaalada Liverpool waxay si xarago leh uga qaadatey sadexda dhibcood ka dib markii 3 gool oo ay saxiixeen Daniel Sturridge,John Terry & Ramires.
Chelsea oo kulankii uu ka maqnaa weeraryahankooda Fernando Toress oo ganaax sadex kulan ah ku maqnaa oo shaley ugu ekaa waxaa goolka madiga ah ee laga dhaliyey u saxiixay Everton daqiiqadii 81-aad ciyaaryahan Apostolos Vellios oo badal lagu soo galiyey.
Everton oo ay haysato jahwareer dhanka dhaqaalaha oo lagu eedeynayo mulkiilaheeda Bill Kenwright in uu jeebka gacanta u galin waayey kooxda oo uu dayacay waxaa qaylo afka ku haya taageerasha kooxda oo ka dalbanaya in isbadal lagu sameeyo mulkiyada kooxda hadii kale Bill Kenwright uu boorsooyinka furo.
Bill Kenwright kulankii shaley wuu daawanayey xitaa kooxdiisa oo away aheyd isagoo sheeda ka eeganayey guuldarashii shaley oo aheyd tii afaraad ee kooxdu la kulanto todobadii kulan ee ay safatey.
Dhinaca kale maalqabeenka Ruushka ah ee kooxda Chelsea iska leh Roman Arkadyevich Abramovich wuxuu shaley qaybta VIP-da uu ka daawanayey ciyaaryahanada kooxdiisa ee dhaqaalaha faraha badani uu ka galey.
Kulamadii kale ee Sabtidii
Kooxda Stoke City oo ku socota jawi wanaagsan xili ciyaareedka ka dib markii maalqabeenka Peter Coates ee kooxdaasi iska leh uu lacag galiyey isla markaana uu khasnadaha lacagta u furey macalin Tonny Pulis in uu kooxda dhiso ka dagaal markii ay ku soo biirtey Premier League-ga sanadkii 2008-dii.
Kulankii Stoke ay shaley ay la ciyaareen gurigeeda Britannia Stadium kooxda Fulhan uu iska leeyahay maalqabeenka reer Masar waxay ku dharbaaxdey kooxdii martida u aheyd 2 gool oo ay saxiixeen ciyaaryahanada Jonathan Walters & Rory Delap
Inkastoo Fulham ay ku gacan sareysay Pall Possession-ka hadana waxay halkaasi kala hoyotey guuldaro.
Goolasha Stoke City
Walters (Daqiiqadii 80-aad)
Delap (Daqiiqadii 87-aad)
Garoonka Stadium Britannia oo ciyaartani ka dhacdey waxaa u soo daawasho tagey 26,890 qof.
Wigan Athletic 1-3 Bolton Wanderers (DW Stadium)
Queens Park Rangers 1-1 Blackburn Rovers (Luftus Road)
Norwich City 3-1 Swansea City (Carrow Road Stadium)
Arsenal oo u soo ruqaansatey kaalinta 10-aad ka dib guul caaqibo leh oo ay ka gaartey Sunderland.
Laba gool oo heer sare ah oo uu dhaliyey ciyaaryahanka captain-ka u haya kooxda jahwareersan ee Arsenal Robin van Persie ayaa waxoogaa neefta ka fujiyey macalinka cadaadisku saaran yahay Arsene Wenger .
Goolka koowaad ayuu Robin van Persie wuxuu ku hubsadey shabaqada Sunderland 29 ilbiriqsi oo kaliya markii ay ciyaartu socotey waxaana goolkaasi uu noqdey kii ugu dhaqsiyaha badnaa xili ciyaareedkan.
Inkastoo Arsenal ay ciyaarta ku hogaaminaysay 1 gool hadana waxaa gool ku yimid laad xor ah (free Kick) shabaqa taabsiiyey ciyaaryahanka reer Sweden Sebastian Larsson oo horey uga mid ahaa kooxda Arsenal waxaana qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala joogay gool iyo gool.
Qaybtii labaad waxaa bilowdey weerar iyo weerar celis iyadoo kooxda martida ah ee Sunderland ay u muuqatey inay kooxda Qorileyda gurigeeda barbar dhac kaga hesho ay daafac gashay waxaa badnaa weerarada ka imaanyey Arsenal.
Inkastoo daafac adag iyo weerar celis ay ku jireen kooxda Bisadaha madow (Black Cats) hadana waxaa gool ku yimid laad xor ah (free kick) si xarago leh u dhaliyey ciyaaryhan Van Perise oo goolkan uu yahay kiisii lixaad xili ciyaareedkan oo shan ka mid ah yihiin Premier League-ga
Goolkan Free kick-ga ah ee Van Persie ka dhaliyey kooxda Bisadaha madow (Sunderland) wuxuu noqonayaa kii labaad ee caynkiisa ah ee uu ka dhaliyo mudo laba sano ah.
Goolasha waxaa dhaliyey Arsenal
van Persie (29 Ilbirisi)
Van Persie (Daqiiqadii 81-aad)
Kulankan oo ka dhacay garoonka Arsenal Emirates Stadium waxaa ka soo qayb galey 60,078 qof (Lixdan kun, todobaadan & sideed qof)
Kulamada kale ee Axad 16 October 2011
Kooxda Tottenham ee ka dhisan waqooyiga magaalada London oo afartii kulan ee ugu dambeysay soo badisey ayaa u safartey garoonka St. James Park ee magaalada Newcastle oo London u jira ku dhawaad 500 km.
Kulankan ayaa kooxda martida loo ahaa ee Newcastle waxaa lagala hormarey gool rigoore ama gool ku laad ah oo uu dhaliyey Rafael van der Vaart ka dib markii uu soohdinta goosha uu qalad ku galey daafaca Newcastle Steven Taylor oo dhulka dhigay ciyaaryahan Emmanuel Adebayor.
Ciyaaryahanka muslimka ah Demba Ba ee haysta dhalashada Faransiiska balse u ciyaara qaranka Senegal oo uu asal ahaan ka soo jeedo ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta wuxuu gool xarago leh oo uu ka soo shaqeeyey kubad qaabeeyaha reer Argentine Jonas Gutierrez uu ku hubsadey shabaqa Tottenham iyadoo ciyaartii ay noqotey 1-1, balse ciyaaryahan Jermain Defoe oo weerarka uga ciyaara Tottenham ayaa shan daqiiqo ka dib markii uu garoonka soo galey wuxuu dhaliyey goolkii labaad ee Tottenham Hotspur, waxaase rajadii sadexda dhibcood ee Tottenham god ku ridey ciyaaryahanka Sh Ameobi oo 4 daqiiqo iyadoo ay ka dhiman tahay joojinta ciyaarta gool uu dhaliyey uu natiijadii ka dhigay 2-2.
Newcastle United kulankan waa kii 8-aad oo xiriir ah tan iyo markii uu bilowdey xili ciyaareedkan aan hal marna dhulka la dhigin dhinaceeda.
Ciyaartan oo ka dhacdey garoonka St. Jemes Park ee magaalada Newcastle waxaa ka soo galey 46,420 qof.
Ba (daqiiqadii 48-aad)
Sh Ameobi &(Daqiiqadii 86-aad)
Van der vaart (Daqiiqadii 40-aad rigoore)
Defoe (daqiiqadii 68-aad).
Kulamada kale ee Axada
West Bromwich 2-0 Wolves The Hawthorns Stadium
Kala horynta kooxaha